Họrọ, idetuo na mado ederede na nano, ederede ederede na ọnụ | Site na Linux
Họrọ, idetuo na mado ederede na nano, ederede ederede na njedebe
Ndi ji ya Vi (ma ọ bụ Vim) na-etu ọnụ mgbe niile na ọ bụrụ na m hụrụ na ọ dị ike karịa nano, eziokwu ma!, ruo n'ókè ụfọdụ. Ọ bụ ezie na nano ezughi oke ma ọ bụ dị ike dị ka vi / vim, ọ bụghị na ogbenye dara nkwarụ hehe.
Ihe enwere ike ịme nano mana ọtụtụ amaghị, ịhọrọ ederede, detuo ederede ahụ ma mado ya n'akụkụ ọzọ nke faịlụ ahụ, lee, m ga-egosi gị otu esi eme nke a.
1 Etu esi họrọ ederede na Nano
2 Otu esi edetuo na Nano:
3 Otu esi esi tinye ihe depụtara na Nano:
4 Họrọ + Detuo + Tapawa na Nano?
Etu esi họrọ ederede na Nano
Iji họrọ na Nano, anyị ga-pịa Alt + A , mgbe ahụ anyị ga-achọpụta otu esi eji akụ akụ (aka ekpe, aka nri, elu na ala) wee tuo ihe anyị chọrọ ịhọrọ.
Alt m na-egosi bụ Aka ekpe, nke dị n’aka nri nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ dabere na nchịkọta keyboard ha kọwapụtara.
Iji kagbuo nhọrọ a, pịa ọzọ Alt + A . Ana m egosi gị nseta ihuenyo:
Otu esi edetuo na Nano:
Detuo anyi ji nchikota Alt + 6 site na nke a, ọ bụrụ na anyị ahọrọghị ihe ọ bụla, anyị ga-e copyomi akara ebe anyị nọ.
Otu esi esi tinye ihe depụtara na Nano:
Iji tinye aka anyị ga-eji Ctrl + U na ebe cursor dị, ihe anyị depụtaghachiri ga-eziga.
Họrọ + Detuo + Tapawa na Nano?
Were ya na anyị chọrọ ịhọrọ ederede, detuo ya ma mado ya, ọ ga - adị otu a:
Anyị na-asọ Alt + A na iji igodo igodo, anyi akara akara ederede achọrọ.
Anyị anaghị pịa ọzọ Alt + A , ma n'aka nri ahọpụtara na ebe ahụ, anyị pịa Alt + 6 i toomi ihe akara.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ịpị igodo idetuo nhọrọ ahụ.
Anyị na-e copyomi ya, ugbu a, anyị na-aga na akụkụ nke faịlụ ebe anyị chọrọ mado ihe mbụ depụtaghachiri, na cursor n'ebe ahụ anyị na-eme: Ctrl + U
Ghọta nke ọma ọbụnadị mmiri hehe, enwere m olileanya na ọ bara uru dị ka ọ bara m 😀
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » Họrọ, idetuo na mado ederede na nano, ederede ederede na njedebe
Next ọrụ .. nhọrọ na ogidi na Nano .. 😉
Ọfọn, ọ bụrụ na ị na-eji òké wee pịa Nchịkwa mgbe ị na-eme nhọrọ, ị nwere ike ịhọrọ ọnọdụ kọlụm. Echere m na ọ ga-enwerịrị ụzọ iji mee ya na keyboard naanị.
Ya mere ee ị nwere ike.
Echiche bụ iji naanị mkpịsị ugodi.
Huu nke ahụ !! na ịpị aka ekpe aka ekpe + aka ekpe na-ahọpụta na òké, nhọrọ a mere na kọlụm mode th .nke a bụ kediegwu, daalụ nke ukwuu maka ozi.
Obu otu ihe ahu ka vim?
Mba, jiri vim detuo idenye:
Iji maa atụ ịchọrọ inomi 4 ahịrị:
Mgbe ahụ mado ị ga-etinye p (lowercase) ma ọ bụrụ na ịchọrọ icho ya n'okpuru akara ugbu a, ebe ọ bụrụ na ọ dị elu karịa nke ugbu a ọ bụ P (nke ukwu)
I nwekwara ike i copyomi (ma ọ bụ kama ịkpụ) akara zuru ezu na Ctrl + K, wee pịa ya na Ctrl + U nakwa.
Zaghachi Gabriel Andrade
Daalụ nke ukwuu…! Nke nnukwu enyemaka dị ka mgbe niile ..!
Zaghachi Luis Graciano
Kedu ihe bụ ihe ahụ?
Site na onye pụrụ ime ihe nile na mgbe na-ezighị ezi (?) Wikipedia:
Nano (akara n) bụ prefix International sistemu na-egosi ihe dị 10 9 -XNUMX (nano = nine).
Kwadoro na 1960, o sitere na Greek νάνος, nke putara "dwarf."
google were gi n'uzo ozo, Nano sitere na ya nnwere onwe nwanne Pico, ha nwere akwukwo ha.
Nano bụ ederede ederede maka sistemụ gbadoro ụkwụ na Unix, dịka GNU / Linux.
Nwanne nwanne m nwoke?
VI GENTLEMEN OR EMACS b .ma nano ???? ssssshhhhhh
Họrọ abụghị ctrl + 6 ???
nano bụ onye nchịkọta ọnụ, nke a ọ pụtara na iwu NANO niile na-ejekwara m ozi na ọdụ ahụ?
Kedu otu o si chọọ nano?
Họrọ na Nano bụ Alt + A ka m tinyere na post, agbanyeghị na Ctrl + G ị nweta enyemaka 😉
Echere m na ọ bụ + ọ bara uru iji aka ekpe wee pịa ma mado na ntanye etiti pịa =)
Mgbe ọ bụ ihe nkesa na-enweghị eserese eserese, ya bụ, enweghị oke ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke a, nke a bụ naanị nhọrọ
M na - edetuo na mado na oke, o di nfe ... Akara m ihe m choro idetuo site na ijide bọtịnụ aka ekpe aka ekpe na ịdọrọ, emesịa m gaa ebe m chọrọ ịpinye m pịa bọtịnụ etiti nke wiil ahụ.
Ma ọ bụrụ na ịnweghị igwe na ngwanrọ ndị a na-ahụ anya, naanị ị ga-arụ ọrụ, ọ bụ ọrụ gpm.
Usoro akọwapụtara ebe a anaghị arụ ọrụ maka m, aka ekpe alt + a anaghị arụ ọrụ maka m, ọ bụrụ na ịhọrọ akara aka ekpe + 6.
Iji chọọ na nano ọ bụ na njikwa + w ma ị dee ihe ịchọrọ ịchọọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-achọ gị ị na-ịpị oge na-aga n'ihu na-achịkwa + w wee banye.
Ee, ọ na - arụ ọrụ ... Abụ m onye nzuzu nke na - emeghị ihe ọfụma.
1 - left alt + a na m dobe ha iji gosi akara mbido site na ebe m chọrọ ịmalite iyingomi
2 - M na-eji mkpịsị aka akụ na-akanye ihe m chọrọ idetuo
3 - left alt + 6 M detuo akara ahụ na clipboard buffe (ọ bụrụ na ịnwere ike ịkpọ ya)
4 - Ana m eji akụ akụ aga ebe m chọrọ iti
5 - njikwa aka ekpe + ị tapao akwụkwọ ahụ
Ọtụtụ afọ na-eji nano, n'ihi na ezutere m ya tupu m hụ ya ma ọ na-ewe obere oge iji mepee karịa geany, na-eche etu hel ị nwere ike idetuo / mado na nano. Ugbu a enwere m ike ịnwụ n'udo.
magburu onwe, enweghị m echiche
KZKG ^ Gaara, ọmarịcha ọkwa. nke nchịkọta akụkọ dị ike na ọdịiche dị n'etiti: nchịkọta akụkọ dị mfe, .. vi nchịkọta akụkọ,… nano nchịkọta akụkọ? ,… Ọ ga-amasị m ịmata etu esi asọpu akara na idetuo… .ma laghachi na nchịkọta akụkọ ọ bụla akpọrọ.
Ọ bara uru ịkọwapụta:
Amaghị m n'ezie ụdị nke linux (nke m, Ubuntu 13.10) ma ọ bụ maka ụdị nke Nano (nke m, 2.2.6) mana, n'ọnọdụ m, nhọrọ ahụ arụghị ọrụ. Iwu nke rụụrụ m ọrụ bụ:
Debe akara akara: CTRL + 6 (Ọ bụghị ALT + A, dị ka isiokwu a na-egosi)
Ndị ọzọ rụụrụ m ọrụ:
Họrọ: Bugharịa ihe nkedo dịka ihe ịchọrọ ịhọrọ.
Detuo: ALT + 6
Tapawa: CTRL + u
Enwere m olileanya na mmadụ ga-ejere gị ozi.
Amaliteghi m acho otu esi eme copy na mado na nano
ugbu a, ọ ga - adịrị m mfe iji nano mgbe ị na - enweghị ebe eserese
Nano bụ ịhụnanya, Nano bụ ndụ <3
M na-eme "tweet" na NANO, ọ na-amasị m ịsị na ịmara. O chebere m oge.
Daalụ maka isiokwu ahụ, ọ bụghị ihe ọjọọ ịmalite ma dokwuo anya obi abụọ mgbe ị nwere faịlụ mepere ma ị bụ oghere.
Ọzọkwa, ozi bara uru, ọ bụrụ na ị nwere, dị ka m, sava linux ndị jikọtara na windo nke Putty, ma ọ bụ MultiPutty nwere ọtụtụ njikọ, ịchọrọ ịpị na windo windo:
1 - Na windo i copyomi gị ederede dị ka ọ dị na mbụ.
2 - Na Linux, ị na-agba ọsọ nano ma gaa na saịtị ịchọrọ ịtọ na ị kụrụ bọtịnụ nke abụọ na òké ma kpoo ihe niile.
Daalụ nke ukwuu maka onyinye nwanne, ekele m.
Iwu ndị ahụ anaghị arụ ọrụ m, ọ bụrụ na ị pịa ALT (Aka ekpe) + A ị mepee menu elu, ịtọ akara mmalite (iji nwee ike kpuchie ederede ka e depụtaghachi) ị pịa Mgbanwe + ALT + A wee ee, tinye akara mbido ma ị nwere ike ndo ugbu a… Sistemụ a adịghị nwayọ ma bụrụ nke na-adịghị arụ ọrụ, tinye akara, ndo, akara ikpeazụ wee detuo… Otu ọ dị mfe iji nwee ndò na Ndị Ntugharị Ntugharị wee mado na CTRL + V not mfe, M na-ahọrọ ndò, idetuo na mado na òké, ọ bụ ngwa ngwa na mfe
XnRetro: Mee ụdị foto gị dị ka Instagram
Koodu Google anwuola, gini bu uzo kacha mma?